Ichaza ukushintsha kombala izinwele ekhanda nasemzimbeni
inqubo enjalo, ezifana izinwele amakhorali, kuyingozi ngempela. It kakhulu enza izinto izinwele futhi kungenzeka ukuthi umphumela uyoba udayi engahlula, futhi izinwele follicle zilimele ngesikhathi amakhorali. Uma yokudweba endaweni blonde u-Adalberto isikhathi eside futhi kuyinto okhuthele blonde, kufanele ucabangele kangaki uchitha ukushintsha kombala nendlela upende wokuthethelela wenza isicelo.
Ngokuvamile, bezinwele, izinwele ukushintsha kombala ochwepheshe uyenze ukuze uhlaka ezinjalo kwenza kwaba lula ukuthola predetermined izinwele umbala futhi ugweme lezimanga ezahlukene ukuthola umbala oyifunayo uma namabala. Ungenza zonke inqubo amakhorali futhi ekhaya, kodwa kubalulekile ukuba enze konke okusemandleni ukuze uvikele izinwele zakho ekulimaleni futhi bazivikele eziyingozi kanye isilwane iphunga udayi. Udayi okuveza ichaza ukushintsha kombala izinwele, njalo isetshenziswa ezingcolile futhi izinwele owomile, ngoba kungaba liziphathe kungalindelekile lapho kuhlangene amanzi. Futhi izinwele zakhe ezingcolile zisetshenziswa ukuze kangcono waziqonda njengoba sebum futhi begcoba ekusabeleni phakathi upende izinwele isenzo kulethe.
Ngemva kokuphela izinqubo amakhorali kufanele begeza izinwele zakho futhi bawasuse ngokuphelele kusukela izinsalela upende. Kungcono ukusebenzisa ekhethekile amashampu okhokhelwayo. Basuke engcono attenuate ngemiphumela ukucindezeleka ezifana ukushintsha kombala izinwele ukubuyisela isakhiwo zalo ezinhle. Uma ngemva ukuthi kusadingeka anombala ke ngempela sisetshenziswe ngemva toning isimame: uyowumisa izinwele umbala ezokwenza eside ahlale egqamile futhi fresh. Nokho, kungcono kakhulu ukuba bafeze lo inqubo in the gumbi, njengoba ochwepheshe kuphela ukwazi ukuthi ukubuyisela izinwele zakho ngemva amakhorali futhi njalo kuyokwenza pick up wena kahle amalungiselelo adingekayo.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi akunakwenzeka ukuba mhlophe izinwele engaphansi kwengu-16 abantu kanye izinwele kanye ekhanda kulonyaka usesebuthaka kakhulu, futhi kubo, inqubo enjalo kungaba ukucindezeleka ngokweqile. Futhi, uma engafanele ukwenziwa, ukushintsha kombala ngisho kwaba izikhathi lapho izinwele amantombazane yawa banganamukeli kunciphe futhi sifinyelele ubude bawo, ngisho phansi kwamahlombe akhe. Lokhu kungenzeka lapho lilimele izinwele follicle, lapho bangakwazi babe buthakathaka kakhulu noma iqede ukusebenza ngokugcwele. Okungukuthi, empilweni kanye isimo follicle izinwele incike ukukhula ubuhle izinwele zethu.
Nokho, kukhona inkambu okuphambene kwesicelo amakhorali - a ichaza ukushintsha kombala izinwele emzimbeni. Abaningi izindlela olukhulu asetshenziswa kule ndawo. Ngokungafani ukushefa, abahluthula, amakhemikhali izinwele ukususwa, izinwele ukususwa usebenzisa izindlela ezahlukene zomculo, izinwele ukushintsha kombala umane wenze obunganakekile ezikhulayo endaweni engafanele uboya obungathandeki. Le nqubo ilula futhi kulula ukwenza ekhaya ngaphandle kwesidingo ukubandakanyeka okhokhelwayo.
Lapha, indlela classical - isicelo eqondile amathuluzi alula, ehlanganisa 50 ml i-hydrogen peroxide, isipuni kwesigamu ammonia liquid nokungeza powder insipho noma ukushefa ayisikhilimu. Le nhlanganisela isetshenziswa endaweni wayefisa emzimbeni futhi waluvumela ukuba some ngokuphelele. Ngemuva omiswe, ukwakheka is siyakazwe ngamanzi, isikhumba ke kudingekile ukuba powder noma talc kunoma iyiphi efanelekayo omiswe lesikhumba powder. Uma ufisa ukuthola umphumela okwanele, ukuthi inqubo enjalo kufanele liphindwe izikhathi eziningana, njengoba izinwele esikhumbeni emva ukwelashwa okuphindaphindiwe, hhayi kuphela ezishintshe umbala, kodwa futhi mancane futhi uyeke. Ngakho baba cishe ezingabonakali.
Indlela aphuce podmyshki.Chasto senza ezinye izinto nje imizwelo, ngesikhathi esifanayo singazi ngisho ukucabanga ukuthi kukhona imithetho ethile koto
"Fitoval" (imoto), inani. Shampoo "Fitoval" nezinwele
Yeka bang for round ubuso eyomsiza ukuba ulungise
Indlela eluka spikelets ngokwayo: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo kanye namathiphu
Pigtail elula original "udrako"
Panorama ka Anapa - uhlobo ijwayelekile eziningi
Umoya omusha umphini ogangeni. Valve ukupholisa yemvelo
Ukubuyekezwa komnikazi we-Suzuki Grand Vitara
Kanjani ukwenza metallic manicure: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo kanye izithombe
Ukudla okumnandi - indlebe kusukela ekuthwaleni
The best opopayi ngonyaka 2014-2015: uhlu, incazelo kanye nokubuyekeza
Bopha ibhande Inayiloni: ukuthi kuyini
Indlela sifake imbali kusuka izinsini? Izindlela wokwenza ukumiswa hook imbali futhi umshini
Epitaph - imibhalo eqoshiwe lethuna ezikhumbuzweni
Amagama angavamile amantombazane, noma ingabe shayela indodakazi